Laharam-pehintany - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Laharampehintany)
Ny laharam-pehintany na laharam-pehy dia fangitra ara-jeografia manome ny fahavaratana na ny fahatsimoana eo amin'ny velaran'ny tany, fajiry na velarana mitelorefy. Ny laharam-pehintany faha-0 dia ny fehibe ary ny laharam-pehintany faha-90 dia ny Tendrontany Avaratra (raha 90°N na +90° no voalaza anatin'ilay fangitra) na atsimo (raha 90°S na -90°). Miaraka ampiasaina amin'ny laharan-jara hasina ny laharam-pehintany hahafantarana tsaratsara kokoa ny misy ny toerana iray eo amin'ny Tany.
Bola maneho ny laharam-pehintany (miloko mena) ary ny laharan-jarahasina
Misy laharam-pehintany manana anarana manokana: ny laharam-pehintany faha 66°33′39″ izao dia faribolan-tendrontany. Any amin'ny faritra avaratra na atsimo kokoa noho io (arakaraky ny ilabolantany isiana) dia hitana manontolo andro (24 ora) ny Masoandro mandritra ny enim-bolana eo ho eo; izany hoe mazava foana ny andro; ary maizimaizina foana ny andro mandritry ny enim-bolana manaraka.
Misy koa ny laharam-pehintany izay mikasika ny fehibe rehefa tonga ny saolistisy; ny laharam-pehintany mikasika ny fehibe ny 21 Jiona dia antsoina Trôpikan'ny Asorotany; ary ny laharam-pehintany mikasika ny fehibe ny 21 Desambra dia antsoina Trôpikan'ny Adijady.
Ny litera grika phi (φ) no ampiasaina hanoratana ny zoro mamaritra ny laharam-pehintany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Laharam-pehintany&oldid=1041397"
Dernière modification le 10 Desambra 2021, à 15:50
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2021 amin'ny 15:50 ity pejy ity.